Tag: nnyocha | Martech Zone
Ọtụtụ afọ gara aga, anyị na ụlọ ọrụ nwere ọtụtụ nde ederede bipụtara na saịtị ha. Nsogbu bụ na ọ bụ naanị ole na ole ka a gụrụ, ma ọ bụ obere akara na injin ọchụchọ, ihe na-erughị otu pasent n'ime ha nwere ego ha nwetara. Aga m ama gị aka inyocha ọba akwụkwọ nke gị nke ọdịnaya. Ekwenyere m na ọ ga - eju gị anya na pasent nke ibe gị bụ ndị ama ama na gị
Ruo ogologo oge, naanị m na-anwa ịjụ ndị mbido ego na ndị ahịa azụmaahịa buru ibu n'ihi na amaara m na m ga-enwe ike ibugharị agịga ntugharị nke ukwuu na ụlọ ọrụ ndị nwere akụ na oge iji weghara òkè ahịa. N'afọ gara aga, maka oge mbụ, ekpebiri m itinye otu usoro ahụ m jiri maka ụlọ ọrụ ndị ahụ nwere mpaghara, obere ụlọ ọrụ… yana ọ nwere mmetụta dị egwu na imeziwanye nyocha ha.
Methodify bu akpaka nyocha nke ihe nlere ahia ma obu otu n’ime otutu aka na uwa nke emeputara nke oma maka imeputa usoro nyocha. Ikpo okwu na-eme ka ọ dị mfe na ngwa ngwa maka ụlọ ọrụ iji nweta nghọta dị mkpa nke ndị ahịa na mpaghara ọ bụla nke mmepe ngwaahịa na usoro azụmaahịa iji wee nwee mkpebi azụmaahịa ka mma. Na-ewere ya otu nzọụkwụ n'ihu, e mere Methodify ka ọ bụrụ nke a na-emezi, na-enye ụlọ ọrụ nzaghachi nzaghachi ụdị ọ bụla
Mọnde, Febụwarị 25, 2019 Mọnde, Febụwarị 25, 2019 Lonlọ Dillon
Ndị na-azụ ahịa taa na-agbanwe ngwa ngwa karịa ka ọ dịbu. N'ihi ya, ịmalite ngwaahịa na-ada ada na ọnụego dị oke elu. A sị ka e kwuwe, ịlele ahịa na ịkọ ọdịmma chọrọ terabytes nke data, nke sitere na ọnụ ọgụgụ nke ire ere, azụmahịa e-commerce, akụkọ ihe mere eme na ngwaahịa, ọnụego ọnụego, atụmatụ nkwado, mmemme pụrụ iche, usoro ihu igwe, na ọtụtụ ihe ndị ọzọ. Iji gbakwunye na nke ahụ, ọtụtụ ụlọ ọrụ na-anọgide na-eleghara mkpa nke itinye mkparịta ụka ndị na-azụ ahịa n'ịntanetị anya maka ịkọ ịzụta n'ọdịnihu
Obere Nchoputa Nchoputa Nwere Ike Canmekọrịta Akpa Akaụntụ na Drivezụ Mbanye
Na Tọzdee, Septemba 4, 2018 Na Tọzdee, Septemba 4, 2018 Douglas Karr
Ọ bụ ezie na ọtụtụ obere azụmaahịa na-ahapụ Facebook, ọ na-atọ m ụtọ mgbe ọ bụla m hụrụ ihe na-atụghị anya ya na-eme ebe ahụ maka onye ahịa. Kwere m, belụsọ na ha na-akwụ ụgwọ iji kwalite posts… Anaghị m atụ anya oke. Otu n'ime ndị ahịa m bụ ụlọ ọrụ na-elekọta ezinụlọ na-arụ ọrụ na steeti Indiana. Ha anọwo ebe a kemgbe afọ 47 ma nwee aha dị egwu. N’oge na-adịbeghị anya, oke mmiri ozuzo oke ikuku dakwasịrị otu obodo dị n’akụkụ Indianapolis, a na-akpọ Greensburg.
Thursday, August 24, 2017 Tọzdee, Machị 25, 2021 Douglas Karr
Dịka akụkụ nke atụmatụ ọchụchọ niile, anyị nwere ụlọ ọrụ na-elekwasị anya na nso nso a, ugboro ugboro, na ọdịnaya dị mkpa nke isiokwu ndị nwere ike ịbawanye ogo na ntụgharị. Ide ọtụtụ ederede dị mkpirikpi bụ otu ndụmọdụ ndụmọdụ ahụ anyị hapụrụ n'afọ ndị na-adịbeghị anya. E nwere ihe ole na ole kpatara ya: Ọdịnaya miri emi - engines na-achọpụta ogo nke ọdịnaya, oge. Ewu ewu na-adabere n'ịdị mma, yabụ na ọ bụghị
Enwere otutu ederede ebe ahụ na etu esi dị egwu. E nwekwara ọtụtụ nde edemede banyere otu esi ede nnukwu ọdịnaya. Agbanyeghị, ekwenyeghị m ụdị ederede ọ bụla na-enye aka. Ekwenyere m na mgbọrọgwụ nke ọdịnaya dara ogbenye nke na-adịghị arụ bụ naanị otu ihe kpatara - nyocha adịghị mma. Nchọpụta na-adịghị mma nke isiokwu ahụ, ndị na-ege ntị, ihe mgbaru ọsọ, asọmpi, wdg na-ebute ọdịnaya dị egwu nke na-enweghị ihe ndị dị mkpa